စစ်ကိုင်းက လေးစားထိုက်ဖွယ် စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ သားငယ်လေး …
June 23, 2019 Thuta Star 0
ဒီ​နေ့ စစ်​ကိုင်းကမ်းနားလမ်းကFood Box ကို ​ရောက်​​တော့ဒီပုံထဲက က​လေး​လေး​ပေါ့ ဦးဦး သား ပိုက်​ဆံ၅၀၀လှူချင်​လို့တဲ့ ဦးဦးက မလှူပါနဲ့သားစားချင်​တဲ့ မုန့်​ယူစားသွားပါ​ပြော​တော့ မဟုတ်​ဘူး သားလဲလှူချင်​လို့တဲ့ (​လေးစားတယ်​သားရယ်​) စက်​ဘီး​သေး​သေး​လေးစီးပီး​ချွေး​တွေနဲ့ လှူချင်​ရှာတာ မလှူရမချင်း မုန့်​တခုမှယူမစားဘူး သူ့အလှူ​ငွေ​၅၀၀ကျပ်​ကိုလက်​ခံပီးမှ အာရှပင်​မှည့်​တဗူးနဲ့ မုန့်​​လေးတထုပ်​ပဲယူသွားရှာတယ်​ အပိုမယူဘူး ရှေ့လူ ​နောက်​လူ […]
ကျယ်မတို့ တောမှာလည်း.. food box ရှိပါတယ်
ကျယ်မတို့ တောမှာလည်း food box ရှိပါတယ် လှူလည်းလှူ ယူလည်းယူပေါ့ လက်ရှိအခြေနေစားသောက်ဖွယ်ရာကတော့ ကောင်းညှင်ထုတ်ရယ် သရက်သီးရယ် သောက်ရေသန့်ရယ်ပေါ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတနော်မြို့နယ် ဘုရားချောင်းအုပ်စု ထိန်တပ်ရွာ ယုဇန ငါးမွေးမြူရေးကုမ္ပဏီ အရှေ့ မိုင်တိုင် ၁၇/၄ပန်းတနော် ဝါးခယ်မလမ်းမပေါ် Credit Unicode ကယွမြတို့ တောမှာလညြး […]
၉ တန်းကျောင်းသူ မုဒိန်းကျင့်ခံရတာကိုယ်ဝန်က ၂ လ ကျင့်သူက အိမ်နီးချင်း ကလေး ၃ ယောက်အဖေ တဲ့….
၉ တန်းကျောင်းသူ..ကိုယ်ဝန်က ၂ လ.. မုဒိန်းကျင့်ခံရတာ..ကျင့်သူက အိမ်နီးချင်း.. ကလေး ၃ ယောက်အဖေ ထားပါတော့..ထုံးစံအတိုင်း တရားတွေ ဘာတွေစွဲ..အမှုတွေ ဘာတွေဖြစ်..ဒီအထိက ပုံမှန်ပါပဲ..ထူးခြားတာက မုဒိန်းကျင့်ခံရလို့ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတဲ့ သမီးက ကိုယ်ဝန်ကို မလိုချင်ဘူး..ဒါကလည်း သဘာဝပါပဲ..ဘယ်အမျိုးသမီးမှ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ ကလေးကို လိုချင်မှာ မဟုတ်ပါ..မိခင်မေတ္တာ ဘလာ […]
သင့်ကောင်လေးက ဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်နေရင် သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေလို့ပါ…
မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်သူနဲ့ မတွေ့ရတဲ့ အချိန်တွေမှာဆိုရင် သူ့ချစ်သူက သူ့အကြောင်းတွေးလား၊ လွမ်းရောလွမ်းရဲ့လားဆိုတာကို အမြဲတမ်းသိချင်နေကြပါတယ်။ သင်နဲ့အတူတူ မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒါမျိုးတွေ လုပ်နေရင်တော့ သင့်ကိုသူ အရမ်းလွမ်းနေလို့ပါ။ (၁) စာတွေအများကြီးပို့တယ် ဒါဟာ သင့်ကို သူလွမ်းကြောင်း ထင်ရှားနေတဲ့ အချက်ပါ။ သူဟာ ပုံမှန်ဆို စာတစ်စောင်တောင် […]
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအရမ်းလွမ်းနေမှန်းသိနိုင်မယ့် ထူးထူးခြားခြား လက္ခဏာ (၃) မျိုး…
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) အိပ်မက်မက်တယ် အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောမိ၊ […]
Food box ကြောင့် လူမသတ်မိပါစေနဲ့..
၂၃..၆..၁၉။ မန်းလေးမှာ စလုပ်ကတည်းက ငမောင်ရေးပြပြီးပြီ။ မြန်မာလူမျိုး တော်တော်များများဟာ ဒါဘာကြောင့် လုပ်တာလဲဆိုတာ ခွဲခွဲခြားခြားမသိသေးတဲ့သူ သိပ်များပါတယ်လို့ ရေးပြပြီပြီ။ နေ့လည်က ရန်ကုန်မှာ food box စလုပ်တာ ဒီအမျိုးသမီးက ဒီလိုယူသွားပါဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်း ရိုက်မိထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို မျက်နှာမဖျက် ၀ိုင်းတင်နေကြပြီ စောက်ရှက်ခွဲနေတဲ့ ခင်ဗျာတို့ […]
ရုရှားနိုင်ငံမှာ ရွှေစည်းခုံပုံတူစေတီတော်အား ပထမဆုံး ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓစေတီတော်အဖြစ် တည်ထားကိုးကွယ်မည်…
အောက်တိုဘာ (၂၆)ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးထေရဝါဒ စေတီတော်တစ်ဆူအား ရုရှားနိုင်ငံမှာ တည်ထားကိုးကွယ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေပြီး ဒီစေတီတော် တည်ထားနိုင်ရေးအတွက် သီတဂူဆရာတော်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ ဥပရောပတိုက်တို့မှာ သာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက် သာသနာပြုနေတဲ့ ဆရာတော် အရှင်ကုသလသာမိက အောက်တိုဘာ (၂၆)ရက်နေ့က မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစေတီတော်ကို ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့၊ ကာလုဂါပြည်နယ်ရှိ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်တွင် […]
အချစ်ခံချင်ရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားပေးရမှာပါနော်…
တစ်ပတ် တစ်ရက်လောက်တော့ ညစာ အတူတူ ထွက်စားပေးတာမျိုး၊ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာမျိုး၊ အပန်းဖြေ ခရီးတိုလေးတွေ ထွက်ပေးတာမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးပါနော်။ အချင်းချင်း လေးစားပါနော် အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ထိန်းရင် ထိန်းတတ်သလို ပျော်ရွှင်စရာ နေ့ရက်လေးတွေကို ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ အရာလေး တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကားဂိတ်မှာကားစောင့်နေတုန်း အနားကပ်ပြီး လူမဆန်စွာလုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်..
ယနေ့မှာပဲ May Eain Dra ဆိူတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင် ကလူမှုကိုယက်မှာ လူမဆန်စွာ ယူတ်မာသွားတာကို အခုလိုရေးသွားပါတယ် ဒီလုပ်ရက်ကတော့ အရမ်းရိုင်းပါတယ် အပြင်သွားစရာရှိလို့ ကားဂိတ်မှာကားစောင့်နေတာပါ အနားကိုကပ်လာပြီးကွမ်းတံထွေးနဲ့ ထွေးသွားတယ် ပထမတော့မသိလိုက်ဘူး အနောက်ကိုကြည့်လိုက်မှတော်တော်ပေသွားတယ် အမြန်ကြည့်လိုက်တော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းပြေးသွားတယ်… သက်သက်လုပ်သွားတာပါ… ကားဂိတ်မှာလဲလူတေအများကြီးကို.. ကိုယ်တစ်ယောက်ကိုလုပ်သွားတာပါ…မိန်းမကလေးတစ်ယောက်ကိုအဲလိုလုပ်တာတော့. အရမ်းအောက်တန်းကျပါတယ် ကိုယ်ဝတ်ထားတာက ရင်ပေါ်ခေါင်ူးးပေါ်မဟုတ်ဘူး […]
ဝေဠု​ကျော် ဂျင်းထည့်သွားတဲ့ အကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ သင်းသင်း
ပြည်​သူ့ အချစ်​​တော်​ ပရဟိတမင်းသားကြီး ​ဝေဠု​ကျော်​ကို အလှမယ် သင်းသင်း က ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ (၄၁၇) ဖြင့် တရားစွဲဆို တိုင်ကြားထားသည့် အမှုကို မတ်လ (၈) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင်​ (၅) ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်း၌ အသံဖိုင်​တွေကို သက်​​သေအဖြစ်​ […]